Qiso Si Maadays Iyo Xikmad Isugu Jirta U Muujinaysa Dhibta Uu Leeyahay Damacu.. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
by cAMiXsuBGc July 27, 2019 0714
Shabakada Kobciye.com waxa uu maanta akhristayaashiisa la wadaagayaa qisadan oo laga soo xigtay qisaska carabtii hore. Waxa ay xambaarsan tahay xikmad si dadban u muujinaysa dhibta ay leedahay damaacinimadu.
Markii uu ninkii reer miyiga ahaa waxoogaa soo lugeeyey isaga oo wata awrkiisii oo uu ku raran yahay safarkii uu magaalada kala yimi, ayaa uu si lama filaan ah u arkay kabtii koowaad, inta uu yara dul istaagay oo uu aad u eegay, ayaa uu is weydiiyey, ‘Kabtu kabtii u ‘ekaa…!!”
Laakiin waa kab keliya oo anfac uma ay lahayn, sidaa awgeed waa uu iska dhaafay, markii uu haddana cabaar socday ayaa uu mar labaad ku soo baxay kabtii labaad oo taalla waddadii, inta uu dul istaagay oo uu hubiyey in kabtu kabtii hore teedii kale tahay, ayaa uu isweydiiyey sida ay kabahani halkan ku yimaaddeen. Waxa aanu isku qanciyey in qof kale oo reer baadiye ahi uu kabahan soo iibsaday, kadibna markii uu halkan safarka ku marayey ay kabahan midiba mar ka dhacday.
Xunayn oo u dhuumanayey, ayaa markii uu ninkii reer baadiyaha ahaa tegey si uu kabtii hore u soo qaato, ina waxa uu furtay awrkii rarnaa ee ninka reer miyiga ahaa sii xidhay waxa aanu kula noqday magaaladiisii.
Ninkii reer miyiga ahaa oo kabtii sita ayaa ku soo noqday goobtii uu awrka ku xidhay, si uu kabtii labaadna u qaato, awrkiisana kaxaysto, laakiin nasiib darro awrkii rarnaa ma joogo. Waa uu raadiyey, meel uu u saarana waa uu garan waayey, isaga oo daalay, ayaanu maalin kadib reerkiisii ku soo noqday isaga oo sita laba kabood awrkii iyo safarkii saarnaana sidaa ku galbadeen.
Furitaanka Ilhaan Omar sirta iyo sababta ka danbeysay Ma Dhab baa in aay kala tageen..
cAMiXsuBGc March 15, 2017
cAMiXsuBGc May 4, 2017
cAMiXsuBGc May 10, 2017